Buug – Cabdicasiis Guudcadde
1. Buugga “Xigtaysiga Xikmadda,” (2015) waxa wada diyaariyay Cabdixaafid Mowliid iyo Cabdicasiis Guuudcadde.
Ku saabsan buugga: “Xikmaddu, asalkeeda bannaanba, waa dhaxal uu ku abtirsado, sheegtana, qof kasta oo bini-aadan ahi. Waxa ay kaalinta koowaad ku cidhiidhsataa neefta Ogsijiinta ah ee dadka oo dhami wada neefsado. Sida ay yidhaahdaanna, murtidu waxa ay ku hadashaa hal af oo keli ah. Haa, hal af, halkaas afna waxa aynu ku micnayn karnaa in uu yahay mid ka dhashay xaqiiqada ah in idil ahaan xikmaduhu ka wada jawaabaan baahi. Waa halkan meesha ay ka soo gelayso aas-aasnimada iyo caws jiilaal ahaansha ay daruuri tahay in dhaxalkaa aan laga qadin. Waa tan ujeedka buuggani uu u soo baxay.” Halkan ayaanad ka dalban kartaa.
2. Buugga “Garashada wax laguu Gartay,” (2015) waxa qoray Cabdicasiis Guudcadde.
Ku saabsan buugga: “Si dunidu u horumarto, waa in qaaraduhu horumar sameeyaan. Si qaaraduhu u horumaraan, waa in qaran kastaa horumar la yimaaddaa. Si qaran kastaa u horumaro, waa in qoys kasta oo dalkaasi leeyahay horumar sameeyaa. Si qoysasku u horumaraanna, waa in qofku shakhsi ahaantiisa u horumaraa. Haddaba, si qofku u horumaro, maxay tahay in uu sameeyo? Waa wayddiinta uu buuggani isku deyayo in uu ka warceliyo!”
Magaalada Hargeysa, waxa aad buuggan ka heli kartaa:
1. Redsea Bookshop, dhismaha Oriental Hotel.
2. Personal Computers Center, agagaarka garoonka kubadda gacanta ee Timacadde.
Magaalada Muqdishana waxa aad ka heli kartaa:
Zaylac Bookshop, ka soo horjeedka Sarta Shaqalaaha.
3. Buugyaraha “Caalamka Akhriska,” (2016) waxa diyaariyay oo qoray Cabdicasiis Guudcadde.
Ku saabsan: Buugyarahan Caalamka Akhriska waxa uu ahaa dhurta ka dhalatay qoraallo taxane ahaa oo qoruhu uu ku fidinayay baraha bulshada bishii Ramadaan ee 1437. Qoraalladaa waxa looga dan lahaa si loo jeclaysiiyo Soomaalida, oo marfashyada ay ka sheekeeyaan loogu soo daro, wax-akhriska. Marka jeclaysiintaasi guulaysato, waxa uu qoraalku naawilayay in la dhiso xidhiidh adag oo ruuxa Soomaaliga ah iyo buugga ka dhex bilaabma. Xidhiidhkaa oo midhihiisa la gurto.
Waxa aad kala degi kartaa halkan.